"Buugga Trump been baa ka buuxda" - BBC News Somali
"Buugga Trump been baa ka buuxda"
5 Jannaayo 2018
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in buugga laga qoray ay ku jiraan eedo dhaawacaya maamulkiisa uuna yahay "mid been ah".
Buugga waxaa diyaariyay Steve Bannon, oo ahaan jiray kaaliyihii istiraatiijiyadda Aqalka Cad, wuxuuna qeexayaa in "la kullankii koox Ruushka ka socotay oo wiilka Trump uu fadhiyay" uu ahaa "khiyaano".
In Bannon uu aaminsan yahay in kulan dhex maray Donald Trump Jr iyo koox Ruush ah uu ahaa "khiyaano qaran".
In Aqalka cad uu yahay "meel laga welwelo ama xataa laga yara baqo".
In gabadhiisa, Ivanka, ay iyada iyo ninkeeda Jared Kushner qorshaynayeen inay noqoto "marwada 1aad ee madaxweynaha".
Waxaa la sheegay in buugga uu ka kooban yahay illaa 200 oo wareysiyo, laakiin qaar ka mid ah ayaa la dhalleeceeyay waxaana la geliyay su'aal.
Balse, haddii xitaa bar ka mid ah buugga uu run yahay, waxay sawir ka bixineysaa muuqaalka xun "ee nacasnimada madaxweynaha iyo Aqalka Cad oo isku qasan", sida uu sheegay tafatiraha BBC ee Waqooyiga Amerika, Jon Sopel.
10 arrimood oo uu daaha ka rogay buugga cusub ee Trump laga qoray
Garyaqaanada Trump oo doonaya in la joojiyaan buug la qoray Madaxweynaha
Mr Trump wuxuu sheegay in uusan Mr Wollf u ogolaan in uu Aqalka Cad gudaha ugalo, uusanna kala hadlin buugga oo uu ku tilmaamay "mid ay ka buuxaan been iyo wakiillo iyo marqaatiyo aan jirin".
Wuxuu sheegay Trump in Mr Bannon - oo shaqada laga tiray bishii August - uu "caqliga ka tagay" ka dib markii uu waayay xilkiisii Aqalka Cad.
Balse Mr Bannon oo ka jawaabay eedda madaxweynaha wuxuu sheegay in uu yahay "nin wanaagsan" uuna taageeray Trump "Habeen iyo maalin".
Mr Trump oo Khamiistii la weydiiyay in ninkii u qaabilsanaa istiraatiijiyadda uu khayaanay wuxuu ku jawaabay: "Ma garanayo, wuxuu igu tilmaamay nin fiican xalay, marka waxaa iska cad in si degdeg ah uu maskaxdiisa u badalay."
Afhayeenka Aqalka Cad, Sarah Sanders, wax kama jiraan ayey ka soo qaaday buugga oo ay ku tilmaamtay "sheeko mala awaal ah" oo laga buuxiyay "been iyo marin habaabin".
Dabka iyo xanaaqa madaxweyne Donald Trump
Muranka u dhaxeeya Trump iyo Bannon oo sii fogaaday
4 Jannaayo 2018
Maqal Buug ka hadlaya arrimaha qoyska
Buug ay Clinton qortay oo caaddaas maray